Musharax Madaxweyne Xasan Cali Kheyre oo ka tacsiyeey Geerida Cumar Carte Qalib | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Musharax Madaxweyne Xasan Cali Kheyre oo ka tacsiyeey Geerida ...
Musharax Madaxweyne Xasan Cali Kheyre oo ka tacsiyeey Geerida Cumar Carte Qalib
Waxaa daqiiqado kahor isoo gaartay geerida Allah ha u naxariistee Cumar Carte Qaalib oo ahaa Reysul wasaarihii iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya. Waxaan qoyska reer Carte Qaalib iyo dhamaan ummadda soomaaliyeed la qeybsanayaa dareenkeyga murugada leh ee ku aadan geeridaas naxdinta leh, waxaana tacsi tiiraanyo leh u dirayaa dhamaan bahweynta ku abtirsata isirka Soomaaliyeed.
Cumar Carte Qaalib wuxuu ahaa mid kamid ah diblomaasiyiintii ugu cuslaa, ugu saameynta badnaa uguna galgalka badnaa ee soo mara taariikhda gayiga Soomaalida, tan geeska Afrika iyo dunida Muslimka. Waxaa maanta qaarada Afrika iyo dunida Muslimka ka dhisan ururro iyo hey´ado uu fikirka sameyntooda Cumar lahaa, ama uu aas-aaskooda gacan libaax ka geystay.
Ilaahay naxariisa janno ha siiyee Cumar Carte Qaalib waxaa lagu xusuusan doonaa inuu ahaa dowlad yaqaan, dad yaqaan iyo dal yaqaan, barre, tusiye iyo hogaamiye heybad iyo han weyn leh, kaas oo taariikh dhaxalgal ah uga tegay jiilasha Soomaaliyeed ee xiligaan nool iyo kuwa mustaqbalka dhalan doona.
Inaa Lillaahi waa inaa Ileyhi Raajicuun, Naf walba waa tii geeri dhadhamisa.
Previous articleHub aruursi balaan oo laga dareemayo magaalada Muqdisho iyo sara kaclaga dareemayo Hubka
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo maanta Cabsi darteed uga baaqday Xafladii Tiyaatarka Maanta
Ra’iisul Wsaaraaha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa xilalka ka qaaday taliyihii ciidamada, madaxii sirdoonka iyo wasiirkii arrimaha dibedda, ayada oo militariga ay maalinkii shanaad wadaan...